Imithetho eli-10 yokutadisha okuhle - ukuqeqeshwa okuqondayo
"Lesi sihloko asingeni ekhanda lami", "ngifunda kakhulu kepha anginalutho olusele", "angineme kulesi sifundo" ... sesikusho kangaki! Kepha ingabe le misho ikhombisa okungakanani okungokoqobo? Imvamisa kakhulu sivame ukweqisa ubunzima besihloko okufanele sifundwe ngaphandle kokunikeza isisindo esifanele endleleni esifundisisa ngayo . Ngenxa yalokhu sesihumushe le mithetho eyishumi yokufunda okuthe xaxa kusuka encwadini ethi A Mind for Numbers: How to Excel in Math and Science (Noma ngabe uyiFlunked Algebra) kaProf. Barbara Oakley (University of California - San Diego)
Ulapha: Ikhaya » Okwabazali » Funda kangcono » Imithetho eli-10 yokufunda okuhle
LANDELA I-PDF EMAHHALA
1 - Ukukhumbula ngokuphelele okuqukethwe
Ngemuva kokufunda ikhasi, bheka kude bese ukhumbula imiqondo esemqoka. Gcizelela okuncane kakhulu, futhi ungalokothi ugcizelele umqondo ongawutholi ngaphambilini ngokusebenza kabusha. Zama ukukhumbula imibono esemqoka ngenkathi ufunda esikoleni noma egunjini elingelilo owawufundele lona. Amandla okukhumbula okuqukethwe kungenye yezinkomba ezibalulekile zokufunda okuhle
2 - Zihlole ukuthi ufunde ini
Kuzo zonke izihloko. Njalo. Ama-Flashcards angabangane bakho
3 - Hlukana nezinkinga
Kuyasiza ukuhlukanisa inkinga eyinkimbinkimbi ibe izingxenye ezilula futhi, lapho isixazululiwe, khomba izinyathelo eziholele kusixazululo. Ngemuva kokuxazulula inkinga, ibukeze ngokwengqondo. Qiniseka ukuthi uyakwazi ukuxazulula isinyathelo ngasinye sazo. Kwenze kube njengengoma oyidlalayo igxathu negxathu ekhanda lakho, okwenza imininingwane ingene ebhlokhini elilodwa ongakhumbula noma nini lapho ufuna
4 - Chitha ukuphindaphinda kwakho ngaphambi kwesikhathi
Hlukanisa okufundayo esihlokweni ngokutadisha isiqephu sakho nsuku zonke, njengomsubathi. Ubuchopho bakho bunjengomsipha: lungabamba kuphela inani elilinganiselwe lokuzivocavoca ngesihloko esithile ngasikhathi
5 - Shintsha phakathi kwamasu ahlukene ukuxazulula inkinga
Ungalokothi uzijwayeze isikhathi eside kakhulu usebenzisa isu elilodwa ukuxazulula uhlobo oluthile lwenkinga - ngemuva kwesikhashana uzobe uphikelela kuhlobo olufanayo lwenqubo. Sebenzela izinhlobo ezahlukene zezinkinga. Lokhu kuzokufundisa ngasikhathi sinye ukuthi uyisebenzisa kanjani futhi nini inqubo (izincwadi azivamisile ukusethwa ngaleyo ndlela, ngakho-ke kuzofanela uzenze ngokwakho). Ngemuva kokwenza isivivinyo, hlola amaphutha kabili, qiniseka ukuthi uyaqonda ukuthi kungani uwenze, bese uzama ukukulungisa futhi. Ukuze ufunde kahle, bhala inkinga ngakolunye uhlangothi lwe-flashcard ngesandla (hhayi kukhompyutha) nesisombululo kwesinye (ukubhala ngesandla kudala izakhiwo ze-neural ezinamandla kunokubhala kukhompyutha). Ungathatha futhi isithombe sekhadi uma ufuna ukulilayisha kuhlelo lokusebenza olukhethekile. Elinye isu kungaba ukuvula incwadi endaweni engahleliwe, ukhethe inkinga bese ubona ukuthi ungayilungisa yini.
6 - Thatha ikhefu
Kuyinto ejwayelekile ukungakwazi ukuxazulula izinkinga noma ukungabi nomqondo osobala wemibalo noma isayensi imiqondo oqale ukuhlangana nayo. Lokhu kungakho ukutadisha kancane ngesikhathi zonke izinsuku kungcono kunokufunda konke ngasikhathi sinye. Lapho uzizwa ukhungathekile ngenkinga yesayensi noma yezibalo, thatha ikhefu ukuze enye ingxenye yengqondo yakho idlule futhi isebenze ngemuva
7 - Chaza isihloko usebenzisa amagama analogies alula
Lapho ulwa nomqondo, cabanga ukuthi Ngingawuchaza kanjani kumfana oneminyaka eyi-10? Ukusebenzisa ama-analogies kungasiza, isibonelo ungaqhathanisa ukuhamba kukagesi nokugeleza kwamanzi. Ungacabangi nje ngokuthi ungachaza kanjani - uchaze ngokuzwakalayo noma ubhale phansi. Umzamo owengeziwe wokuthi ukusho noma ukukubhala kukuvumela ukuthi uthole umqondo ezingeni elijulile
8 - Gxila
Cisha zonke izinto eziphazamisayo ocingweni nakwikhompyutha yakho bese uhlose ukuthola isikhathi semizuzu engama-25. Gxila kakhulu kuleyo mizuzwana engama-25 bese uzama ukusebenza ngenkuthalo ngangokunokwenzeka. Lapho i-timer ikhala, ziphathe emvuzweni omncane omnandi. Zimbalwa izikhathi ezinjengalezi phakathi nosuku ezingakuthuthukisa ngempela ku-studio. Ukuzama ukuthola izikhathi nezindawo ongazifunda kusengaphambili - hhayi eduzane nekhompyutha noma ifoni yakho - kuzofika ngokwemvelo
9 - Shwashisa i-toad ekuqaleni
Yenza imisebenzi enzima kakhulu kuqala, ube nomqondo omusha
10 - Sebenza ngokushukumisela
Cabanga ukuthi uqale kuphi nokuthi isifundo sakho sizokuholela kuphi. Endaweni lapho ufunda khona, beka isithombe noma amagama akukhumbuza inhloso yakho. Zibheke lapho uzwa sengathi izisusa ziyahluleka
Imithetho eli-10 yokufunda okuhle2015-03-242020-02-22http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngUkuqeqeshwa kwengqondohttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2015/03/10Buono.png200px200px
Iyiphi indlela ephumelela kakhulu yokutadisha?Indlela yokutadisha, Funda kangcono